Umzimveliso wocingo, Eyandisiweyo Metal wocingo, welding wocingo - Ansheng
SIBONELELA NGEZIXHOBO EZIPHAKAMILEYO
Isefu ayisiyentsimbi okanye ingxubevange; yinkqubo apho isongezo se-zinc sifaka isinyithi ukuthintela ukurusa. Kwicandelo lemveliso yocingo, nangona kunjalo, ihlala iphathwa njengodidi olwahlukileyo ngenxa yokusetyenziswa kwayo ngokubanzi kuzo zonke iintlobo zezicelo. Ikwanokwenziwa ngocingo lwesinyithi emva koko ukutyabeka i-zinc kwalenza. Ngokubanzi, olu khetho lubiza kakhulu, kodwa lubonelela ngenqanaba eliphezulu lokumelana nokubola ...
Isinyithi esinyithiweyo, ekwabizwa ngokuba yintsimbi yekhabhoni, sisinyithi esisetyenziswa kakhulu kwicandelo lokwenza umnatha wocingo. Yenziwe ngokukodwa yintsimbi kunye nenani elincinci lekhabhoni. Ukuthandwa kwemveliso kungenxa yexabiso eliphantsi nokusetyenziswa kwayo ngokubanzi. Umnatha wocingo Plain steel wire umnatha na stro ...
Welding wocingo lwenziwa ezikumgangatho ophezulu wire-carbon zentsimbi ezikhawulezayo, kusingathwa ngendlela oluzenzekelayo oluchanekileyo izixhobo ngoomatshini indawo iwelding, uze electro iqaqanjiswa eshushu-nkxu kwalenza, PVC kunye nezinye unyango umphezulu passivation kunye plasticization. Isixhobo: Intambo yentsimbi ephantsi yentsimbi, intambo yentsimbi engenanto, njl.Iindidi: Isefu yocingo olwenziweyo, i-PVC yentsimbi yocingo, ipaneli enemigca ehlanganisiweyo, intsimbi engenasici engenazingcingo, njl njl.Ukuluka kunye neempawu: kwalenza ngaphambi kokuluka, ...
Umnatha wesinyithi owandisiweyo yinto yentsimbi eyenziwe ngumbumba owandisiweyo wokubetha kunye nokucheba umatshini ukwenza umnatha. Isixhobo: Ipleyiti yeAluminiyam, ipleyiti yentsimbi ephantsi, ipleyiti yesinyithi, ipleyiti ye-nickel, ipleyiti yobhedu, ipleyiti yealuminium, ingxubevange, njl. Umphezulu womnatha uneempawu zokuqina, ukumelana nomhlwa, ukumelana nobushushu obuphezulu, kunye nefuthe lokungenisa umoya. Iindidi: Isivumelwano ...
Inkampani yethu lishishini eligxile kwimveliso kunye nokuthengiswa kweengcingo ezahlukeneyo zetsimbi kunye nezixhobo zokucoca ulwelo. Iimveliso zisetyenziswa kakhulu koomatshini, i-petrochemical, iplastiki, isinyithi, amayeza, unyango lwamanzi kunye namanye amashishini. Inkampani yethu iye phambili imveliso kunye novavanyo izixhobo, ngqongqo ulawulo lwezenzululwazi kunye nolawulo lomgangatho. Emva kweminyaka engaphezu kwama-20 yophuhliso, iye yaba ishishini mihla ukudibanisa R & D, uyilo, imveliso, ukuthengisa, kunye nenkonzo. Ukongeza ukwanelisa abathengi basekhaya, iimveliso zethu zithunyelwa eMelika, eBrazil, eJamani, ePoland, eOstreliya, eNew Zealand, eTaiwan nakwamanye amazwe nakwimimandla.
Isinyithi esandisiweyo yishiti yentsimbi ethe yaqhekezwa emva koko yolulwa ukuze yenze idayimane okanye isitayile esimacala mathandathu. Abantu banokuyisebenzisa ngeendlela ezininzi Iinkcukacha ezinje ngezantsi: Imicu yimicu yentsimbi ekroliweyo, okanye amacala okuvula idayimane. I-SWD, okanye iNdlela emfutshane yoyilo, ngumgama phakathi kwep ...
Iscreen se-extruder sikwiindidi ezahlukeneyo zocingo olucoliweyo
Izinto ikakhulu intsimbi plain, steel stainless kunye nezinye izinto. iipakethe zescreen sensimbi ziyamelana nomhlwa kunezinye izinto. Izikrini ze-Stainless extruder Screens zisetyenziswa ngokubanzi kwiphepha leplastikhi, i-granulator, kunye nelaphu elingenalo, umbala we-masterbatch, njl.
Inkcazo yemveliso Umnxeba wocingo ubhekisa kwimveliso yocingo lwentsimbi eyenziwe ngezinto zokucoceka okuphezulu (ucingo lwe-nickel, ipleyiti ye-nickel, i-nickel foil, njl.) Umxholo we-nickel wama-99.5% okanye ngaphezulu. Ngokwenkqubo yemveliso, iimveliso zahlulwe zezi ndidi zilandelayo: A. Umzimveliso w ...
1. Igama lemveliso / isiteketiso: I-epoxy camera camera mesh, epoxy coating mesh, electrostatic coating mesh, hydraulic filter filter mesh, hydraulic filter mesh, hydraulic filter mesh mesh, filter filter mesh, epoxy window screen mesh. 2. Ukwaziswa okucacileyo kwemveliso: